सवा करोड कमाउने पनि गरिब हुन्छन् ! -
सवा करोड कमाउने पनि गरिब हुन्छन् !
३० असार २०७५, शनिबार ०८:३५ 317 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ । तपाईंको कमाई त लाखभन्दा पनि धेरै छ । जिन्दगी कति आनन्दपूर्वक बितिरहेको होला यहाँको त रु समाजमा यस्तै खालका वार्तालाप हामी धेरैजसो सुन्ने गर्छौं । जसको मासिक आम्दानी लाखभन्दा बढी छ, उसलाई सफल व्यक्ति मानिन्छ । समाज र परिवारमा पनि उसलाई सफलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर संसारमा एक यस्तो देश पनि छ जहाँ १ करोड २८ लाख रुपैयाँ कमाउनेलाई पनि गरिब ठानिन्छ । यो सहर हो, अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्को ।
ओहिसो जस्ता राज्यमा यो भाडा ५८ हजारको नजिक हुन्छ । यी सहरको तुलनामा सनफ्रान्सिस्कोमा कमाईको अनुपामा भाडामा खर्च धेरै हुन्छ । अर्को सहरको तुलनामा यहाँ कमाई दुई गुणा अवश्य हुन्छ, तर भाडामा २७० प्रतिशत धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सनफ्रान्सिस्कोमा रहनु कुनै आर्थिक चुनौतीभन्दा कम छैन । अमेरिकी सरकार यो मान्छ कि यदि समान क्षेत्रमा समान सदस्यको परिवार औसल कमाईभन्दा ८० प्रतिशत या त्यसभन्दा कम कमाउँछ भने त्यो गरिब हो ।बीबीसी’ को सामग्री राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।